Xidiggii hore ee xulka Turkiga Hakan Sukur oo la xirayo kaddib markii lagu soo eedeeyay inuu… – Gool FM
Xidiggii hore ee xulka Turkiga Hakan Sukur oo la xirayo kaddib markii lagu soo eedeeyay inuu…
(Istanbul) 13 Agoosto 2016 – Xeer Ilaaliyeyaasha Turkiga oo baaritaan ku haya dadka lala xiriirinayo Afgembigii dhicisoobay ee Bishii July lagu doonayay in lagu rido xukunka Erdogan ayaa waxa ay haatan soo saareen warqad lagu soo xirayo xidiggii hore ee Kubadda Cagta Turkiga Hakan Sukur.
Sida ay faafiyeen saxaafadda Turkish-ku waxaa Hakan Sukur lagu soo eedeeyay in uu xiriir la leeyahay Wadaadka Mareykanka ku nool ee lagu tilmaamay inuu ka dambeeyay isku daygii afgembigii guul darreystay ee Turkiga, waxaana laacibkii hore uu sanadkii la soo dhaafay u guuray Waddanka Mareykanka.
Sukur waxa uu ahaa xubin ka tirsan Xisbiga ‘AK party’ ee talada Turkiga haya inkastoo 2013 uu is casilay kaddib markii Madaxweyhne Erdogan uu hadallo adag ku weeraray Odayga Mareykanka fadhiya ee Golen.
Dhinaca kale mar la wareystay Sukur sababaha uu ugu wareegay Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in uu dalkaasi u aaday si uu u soo barto luqadda Ingiriiska.
Sukur oo inta badan u soo ciyaaray kooxda Galatasaray ayaa ahaa laacibka ugu goolasha badan taariikhda xulka Turkiga, isagoo 112 kulan oo uu u saftay u dhaliyay 51 gool.
Ibrahimovic oo aaminsan inuu 3 xilli ciyaareed la sii joogi doono Manchester United
HOR DHAC: Manchester City Vs. Sunderland